PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - Ufuna iKZN izigabise ngenakho
Ufuna iKZN izigabise ngenakho
Isolezwe - 2018-02-15 - EZOMNOTHO - BONISWA MOHALE
ISIKHULU esiphezulu seDurban Chamber of Commerce and Industry, uNkk Dumile Cele, sithe iKwaZulu-Natal kufanele izimakethe njengesizinda samabhizinisi uma izimisele ukuthuthukisa umnotho.
UNkk Cele usho lokhu emcimbini iKZN Business Conversations obukwelinye lamahhotela eMhlanga ngeledlule.
Ubengomunye wezikhulumi emcimbini. Uthe abatshalizimali bayathanda ukufaka imali yabo endaweni enabantu abanamathalente ahlukile nengqalasizinda esezingeni okuyizinto iKwaZulu-Natal enazo.
“Mhlawumbe asizikhangisi ngendlela efanele. Kudingeka sitshele abatshalizimali ukuthi siyindawo ekahle enabantu abanamakhono efanele ukuthuthukisa umnotho. Abatshalizimali bafuna indawo efudumele, enengqalasizinda esezingeni eliphezulu futhi enobuholi obucabanga izindlela ezintsha zokuxazulula izinkinga,” kusho uNkk Cele.
Uthe beyiDurban Chamber bayaqhubeka nokuba yizwi losomabhizinisi ngokukhuluma ngezinto nemithetho ebathintayo.
Ugqugquzele osomabhizinisi abancane nabakhulu ukuthi babe ngamalungu eDurban Chamber ngoba uma bekhuluma ngezwi elilodwa akukho okungama endleleni yabo.
Uphethe ngokuthi uma iKwaZulu-Natal izimisele ngokukhulisa umnotho wayo kufanele izikhangise njengekomkhulu elifanelekile ezinkampanini zomhlaba.
Lo mcimbi ubuhlelwe yisiteshi somsakazo i-East Coast Radio, ubuhanjelwe nangusomabhizinisi ohlonishwayo eNingizimu Afrika, uMnuz Sandile Zungu weZungu Investments. Uthe yena utshale kakhulu imali yakhe KwaZuluNatal ngoba yindawo ekahle uma ufuna ukukhula.
UMnuz Eric Apelgren oyiNhloko yoPhiko lwezangaphandle kuMasipala weTheku ugqugquzele osomabhizinisi ukuthi beze nezindlela ezintsha zokuxazulula izinkinga zomphakathi bebe benza imali.
Uthe uhulumeni uhlale ezimisele ukubasiza ngaso sonke isikhathi.
UMnuz Kim Macilwaine ongusomabhizinisi uthe abantu baKwaZulu-Natal bathobeke kakhulu abakwazi ukugabisa ngokuhle uma bekhuluma ngesifundazwe sabo.
“Abantu baKwaZuluNatal baye babone sengathi bayachoma uma bekhangisa kakhulu ngesifundazwe sabo. Abakukhohlwayo wukuthi abatshalizimali bafuna ukuzwa konke okuhle ngendawo abazofaka kuyo imali,” kusho uMacilwaine.
UMnuz Allan Hirsch, wenkampani yempahla kagesi iHirschs, enekomkhulu layo KwaZulu-Natal, uthe ukuba nechweba eduzane nabasebenzi abazinikelayo yikona okuyenza ithande ukusebenzela kulesi sifundazwe.
Uthe nezindleko zebhizinisi azimbi eqolo njengoba kulula kakhulu ukuthutha impahla iye ezimakethe zomhlaba.
IGeneral Manager ye-East Coast Radio, uNkk Boni Mchunu, ithe ifuna ukubona osomabhizinisi benza umnyakazo othile ukuthuthukisa iKwaZulu-Natal bangagcini ngokukhuluma.
Izithombe: ABHI INDRARAJAN
BAFUNA iKwaZuluNatal izikhangise njengesizinda sezinkampani ezinkulu uMnuz Kim Macilwaine, uNkk Nicola Tyler, uNkk Boni Mchunu, uNkk Dumile Cele noMnuz Hamish Erskine
UMNUZ Sandile Zungu uthi utshale imali yakhe eningi KwaZulu-Natal ngenxa yethalente labasebenzi nokuthi yindawo eyenza kube lula ukuthuthukisa ibhizinisi